Timaha xubinta taranka ragga | Ragga Stylish
Si aan xishood lahayn uga hadlaya timaha xubinta taranka ragga
Xishoodka ka dhex jiray ragga fikradda ah inuu qirto inay dan ka leeyihiin quruxdooda ayaa bilaabeysa inay noqoto xusuus hore. Kahor waxay ahayd wax aan laka fikiri karin in dadku si furan ugala hadlaan arjiga kiriimyada ka hortagga duuduubka ama fiiro gaar ah u leh timaha xubinta taranka, laakiin hadda taasi way is bedeshay.
Rag badan ayaa isticmaala kiriimyada iyo wax-soosaarka ama jarjara timahooda jirka oo dhan, oo ay ku jiraan timaha beeshu. Intaas waxaa sii dheer, ragga badankood oo sameeya kan dambe waxay hubiyaan iyaga oo aan wax ceeb ah lahayn (ma jirto sabab) in ay ugu wacan tahay coquetry. Waxay si fudud u jecel yihiin muuqaalka iyo dareenka 'breed' pubis, laakiin waxaa jira sababo kale oo badan oo lagu jaro ama, maxaa diidaya, in gebi ahaanba laga takhaluso timaha ku koraya beertada. aag isku dhow.
Sida laga soo xigtay sahan ay sameysay nooc caan ah oo ka mid ah xiirashada alaabta, boqolkiiba 92 haweenka ayaa doorbida ragga timahooda taranka. Intaas waxaa sii dheer, dhaqankani wuxuu kaloo gacan ka geystaa yareynta urka jirka, gaar ahaan xilliga xagaaga. Kaliya iyadoo yar oo dherer ah, si weyn u kordhiyaa ah dareen cusub hoos.
1 Maxay yihiin ikhtiyaarrada u gaarka ah xirashada timaha xubinta taranka?
2 Sida timaha loogu jaro mandiil mandiil
Maxay yihiin ikhtiyaarrada u gaarka ah xirashada timaha xubinta taranka?
Marka laga reebo, dabcan, inaad uga tagto dabiici, waxaa jira saddex dariiqo oo aad ku xirato timahaaga bustaha: jarjar, xiirid iyo wax soo saar. Fudud goynta lagu sameeyay aalado koronto oo si gaar ah loogu talagalay timaha jirka ee ragga ayaa ku filan ragga badankood, laakiin waxaa jira kuwa doonaya jilicsanaan weyn.
Si aad uhesho muuqaal gebi ahaanba siman, waa inaad isticmaashaa makiinad, asagoo marka hore timaha jarjaraya, wax ama aadayso xarun si aad uhesho ka saarida timaha laser, oo u baahan dhowr kalfadhi, markaa haddii aad go'aansatay in aagga la bartilmaameedsado xagaagan, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u socoto, ayaa ka sii fiicnaanaya.
Sida timaha loogu jaro mandiil mandiil
Haddii aad doorato inaad ku sameyso a mandiil, taas oo ah tan ugu fudud uguna dhaqaale badan, qaado qubeyska qabow marka hore (maqaarku wuu adkaanayaa wuuna nuglaanayaa) kuna mari jel xiiran oo hufan si aaggu u muuqdo markasta. Faaligyada daabku waa inay noqdaan kuwo gaaban oo siman si looga hortago dillaacyada. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira fursad wanaagsan oo ah xoqid yar oo dhici doonta. Hadday taasi dhacdo, ha ka welwelin, maxaa yeelay waxay ku dhacdaa wax la saadaalin karo, laakiin haa, hubi inaad ku codsatid moisturizer wanaagsan aagga oo dhan markii aad dhamaysid, sidaad u samayn lahayd haddii aad xiirto gadhkaaga
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Si aan xishood lahayn uga hadlaya timaha xubinta taranka ragga
Talooyinka quruxda ku saleysan ee Hydrogen peroxide